PCB ဘုတ်အဖွဲ့ဒီဇိုင်း - အလွန်ကောင်းမွန်သော LAYOUT အတွက်အကောင်းဆုံးသောလမ်းညွှန်
21-02-23 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ်ပြား (PCB) ကိုနားလည်ခြင်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်တွက်ချက်ရာတွင်အခြေခံကျသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်လုပ်နေသောကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်ပါကထိုအစိမ်းရောင်စာရွက်များနှင့်သူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိရှိရမည်။ ဒါပေမယ့် PCB တစ်ခုဖန်တီးတဲ့အခါဒီဖြစ်စဉ်ကရိုးရှင်းပါတယ်။
Flex PCB တောင့်တင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် circuit board သို့မဟုတ် FPC ၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုတောင့်တင်းသောသူများနှင့်ပြဌာန်းရန်လိုအပ်သည်။ PCB တောင့်တင်းခိုင်မာစေရန်အတွက်ဘုတ်၏အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုတင်းကျပ်ရန်အသုံးပြုသည်၊ သို့မှသာဆက်သွယ်မှုများသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပိုမိုခိုင်မာသောအပိုင်းသို့ပေါင်းထည့်ရန် / ရောင်းချရန်ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်သည်။ အဆိုပါ PCB တင်းကျပ်သော o အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ...
21-02-02 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
လူအများစုကဘာကြောင့်ပုံနှိပ်ဘုတ်ပြားဟာအစိမ်းရောင်ဖြစ်နေရတာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအခြားအရောင်များကိုပိုမိုမကြာခဏလာကြဘူး, နှင့်ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေသောအစိမ်းရောင်အကြောင်းကဘာလဲ PCBs တွင်သင်တွေ့ရသောအစိမ်းရောင်အရောင်နှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်ရန်အနည်းငယ်သောအချက်များရှိသည်၊ ဤဆောင်းပါးသည်သင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောအရာများကိုရှင်းလင်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သူတို့၏ရှုပ်ထွေးမှုပေါ် မူတည်၍ PCB စစ်ဆေးခြင်းအတွက်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဤနေရာတွင် PCBAs ကိုတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်စမ်းသပ်ရန်အသုံးအများဆုံးနှင့်အသုံးများဆုံးနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးထားသည်။ In-Circuit Testing (ICT) အဆင့် - PCB ပရိသတ်၏အဆုံးတွင်ရည်ရွယ်ချက်။ ထုတ်လုပ်မှုချို့ယွင်းချက်များကိုဖမ်းယူပြီး PCB ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတည်ပြုသည်။
Gerber ဖိုင် extension များ
FUMAX TECH ၏ပုံရိပ် Gerber ဖိုင်များအသုံးပြုခြင်းသည် PCB ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖန်တီးရန်နှင့်ရောဂါရှာဖွေရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်လိုအပ်သည့် software နှင့်အသိအမှတ်ပြုရန်အတွက် extensions များအပါအဝင်ဤတွင် Gerber ဖိုင် extension များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ Gerber ဖိုင်များဆိုတာဘာလဲ။ Gerber File သည်အလွှာတစ်ခုစီကိုကိုယ်စားပြုသော 2D ပုံဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်း 1 PCB ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု: FR4
FR4 သည် PCB ဘုတ်တပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ FR သည် Flame Retardant ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် FR1 နှင့် XPC တို့ထက်အပူခံနိုင်ရည်ရှိပြီး fiberglass epoxy laminate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ FR4 PCB ကိုယေဘုယျအားဖြင့် FR4 ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ FR4 သည်စျေးကွက်တွင် ၀ ယ်လိုအားအလွန်များပြားသည့်အကြောင်းရင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ● Compacta...
အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် PCB ကို Reverse လုပ်နည်း
PCB တစ်ခုအားမည်သို့အင်ဂျင်နီယာမည်သို့ပြန်လည်တည်ဆောက်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်သင်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်သိသာထင်ရှားသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်မည်မျှသက်ဆိုင်သည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒီဖြစ်စဉ်သည်အချိန်နှင့်သည်းခံခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာမျိုးစုံလိုအပ်သည် PCB ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်လျှင်အကျိုးရလဒ်သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ ဒီနေရာမှာဘယ်လို ...
LED Lights, Aerospace နှင့် Medical Market တို့တွင် PCB အသုံးပြုခြင်း
အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြစ်သော LED မီး၊ မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများမှခေတ်မီရှုပ်ထွေးသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အာကာသစျေးကွက်များအထိ PCB များအသုံးပြုမှုသည်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးပွားလာနေသည်။ ထို PCB များသည်နည်းပညာတိုးတက်မှုများကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောအလွှာပုံစံများဖြင့်ရောက်လာသည့်နေ့ရက်များပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။
မှတဆင့် -Hole vs. Surface ကတောင်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဆီမီးကွန်ဒတ်တာထုပ်ပိုးခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုလိုအပ်မှု၊ အရွယ်အစားသေးငယ်မှုနှင့်အသုံးဝင်မှုတိုးမြှင့်မှုတို့အတွက်ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာသည်။ ခေတ်မီ PCBA ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် PCB သို့အစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်အဓိကနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ Through-Hole Mounting နှင့် Surface Mounting ။ Shenzhen PCBA OEM ထုတ်လုပ်သူ ...
PCB Soldering ချို့ယွင်းချက်များနှင့်သိကောင်းစရာများ
ပုံနှိပ်တိုက်နယ်ဘုတ်ပြားများ၏ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အချို့သောချွတ်ယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ ငွေ၊ ဂုဏ်သတင်း၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာအချိန်ကိုလက်ခံသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၊ PCB ကျရှုံးမှု၏အကြောင်းရင်းအချို့ကိုသင်နားလည်နိုင်လျှင်၊
Bycharles - PCB တပ်ဆင်ခြင်း၏ Through-Hole နည်းပညာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း
Through-Hole Technology through-hole အစိတ်အပိုင်းများသည်နည်းပညာနှစ်ခု၏အဟောင်းကိုကိုယ်စားပြုသော်လည်း၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များရှိနေသေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂဟေသံဖြင့်ဝါသနာပါသောမည်သည့်ဝါသနာရှင်မဆိုနိမ့်နိူင်ငံများဖြင့် ဖြတ်၍ အပေါက်ဖောက်သည့် PCB သို့မဟုတ်တူညီသောအရာအနည်းငယ်ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
Turnkey PCB Assembly နှင့် EMS အကြောင်းသင်ဘာတွေသိထားရမလဲ။
အပိုင်း ၁: Turnkey PCB Assembly နှင့် EMS ဆိုတာဘာလဲ။ Turnkey PCB assemble သည် PCB ပြုလုပ်ရာတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်အားလုံးပါ ၀ င်သည်။ အီလက်ထရောနစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများ (EMS) တွင်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများပါဝင်သည်။